Maitiro Ekushandisa Inobudirira Kushambadzira Yekushandisa Strategic | Martech Zone
Maitiro Ekushandisa Inobudirira Kushambadzira Automation Strategic
Wednesday, May 6, 2015 Chipiri, May 5, 2015 Michael Shearer
Unoisa sei iwe rakabudirira kushambadzira otomatiki zano? Kune mazhinji mabhizinesi, uyu ndiwo mubvunzo (kana kupfuura) mubvunzo wedhora. Uye iwo mubvunzo wakanaka kwazvo kuve uchibvunza. Nekudaro, kutanga iwe unofanirwa kubvunza, chii chinoratidzira se kubudirira kushambadzira otomatiki zano?
Chii chinonzi Yakabudirira Kushambadzira Yekushandisa Strategic?
Inotanga ne chinangwa kana seti yezvinangwa. Iko kune mashoma akakosha zvibodzwa zvinokubatsira zvakajeka kuyera kushandiswa kwakabudirira kwekushambadzira otomatiki. Zvinosanganisira:
Kubudirira Kushambadzira Kwekushambadzira Strategies Mhedzisiro mu wedzera mu:
Anokodzera mutungamiri wechizvarwa
Kubudirira Kushambadzira Kwekushambadzira Strategies Mhedzisiro mu Deredza mu:
Yakarasika mikana yekutengesa
Kunyangwe uchifunga huwandu hwakawanda hwezvinangwa iwe hwaunogona kuzadzisa, kuendesa yakabudirira kushambadzira otomatiki zano haina kuvimbiswa.
Kutsanangura Yako Yekushambadzira Yekushandisa Strategic
Ndakafunga nezve 20+ zviitiko zvekushambadzira otomatiki ini ndakabatsira kuendesa uye izvo zvakabudirira zvakanyanya zvakave zvakafanana. Ndakawana zvakafanana zvakafanana kune ese akabudirira ekushambadzira matomati nzira ini ndanga ndiri chikamu che: inoshanda inotungamira manejimendi uye yakasimba zvemaraibhurari.
Inobudirira kutungamira manejimendi chikamu chakapamhamha chekushambadzira otomatiki saka ini ndichachipaza munzvimbo dzakakosha dzehutungamiriri manejimendi izvo zvinobatsira chero bhizinesi kuwana budiriro yekushambadzira otomatiki. Kutanga, kutengesa uye kushambadzira kunofanirwa kuuya pamwechete kutsanangura kutungamira. Zvirinani izvozvi, tsanangura mutungamiriri pakati peeseti yemaprofiles kana manas. Ndedzipi dzakakosha huwandu hwevanhu / firmographic hunhu hunoita hutungamiriri?
Kugadzira matanho ako ekutungamira inotevera. Izvi zvinogona kuve zvakapusa kunge echinyakare anotungamira matanho senge MQL, SAL, SQL, nezvimwewo, Kana, kambani inogona kugadzira zvirevo zvetsika zvinotungamira zvinonyatso kuona matanho akasarudzika mukutenga kwevatengi.
Mushure, tungamira tsananguro uye nhanho, iwe unoda mepu zviripo zvemukati kune yega danho rekutungamira. Izvi zvinokubatsira iwe kuitisa kutungamira kurera zvichienderana nedanho rekutungamira razvino. Apa ndipo panotangira raibhurari yemukati yezvinhu. Nekuva nezvakakura zvemukati zvekugovana munzvimbo dzese dzekutengesa fanera, kushambadzira otomatiki kune chinangwa. Pasina raibhurari yakanaka yezvinyorwa, unenge uine zvishoma zvekutaura kana kugovana chero kukosha.
Kugadzira Yako Yekutungamira Ekurera Chirongwa
Kudzokera kutungamira kuriritira, kutsanangura uye kugadzira mapurogiramu ekurera ekurera inhanho yakakosha mukuendesa kushambadzira otomatiki zvinobudirira. Matanho ekutsanangudza lead / lead danho inoita basa rakakosha pano ndosaka ndataura nezvavo, asi ako epamberi ekurera ekuronga zvirongwa zvichagadzira kana kuputsa yako yekushambadzira otomatiki mari.
Kune anotungamira ekurera mapurogiramu, zvinokurudzirwa kwazvo kuti ugadzire inoyerera yeako epamberi ekurera zvirongwa kuti ubatsire kuvaka nzira dzekurera, kutsanangura zvinodikanwa zvinokonzeresa, kuona zviripo zvipuka uye kurongedza kutengesa & kushambadzira mabasa. Nekugadzira nekudzokorora inoyerera inoyerera pamwe nevanobata (semuenzaniso, zvekutengesa uye zvekushambadzira zvikwata), munogona kuuya pamwe chete pamushandirapamwe unoshanda, kugadzirisa matambudziko anogona kukakavara nekupa mabasa munguva yese yemushandirapamwe pazvinodiwa.
Kuti ugone kunyatsorera zvinotungamira, zvisinei, iwe unofanirwa kuve unokwanisa kuendesa akakodzera zvemukati panguva chaiyo. Kuve neakasimba raibhurari yezvinyorwa uye kurongedza kuti utungamire matanho hazvina kukwana. Kuve neyako yekushambadzira otomatiki inokonzeresa kuunzwa kwezvakakodzera zvemukati zvinoenderana nekugadzira smart mabhizinesi emitemo anozvibatidza otomatiki izvo zvemukati zvine chekuita nezvezvakatungamira zviitiko.
Iyo yakadzika iwe yaunogona kuteedzera inotungamira zviitiko uye gadzira yakatarisana yekutungamira yekurera mishandirapamwe inopindura zvakateerana kune huwandu hwevanhu + chiitiko seti, iwe unonyanya kubudirira iwe uchave uine wekushambadzira otomatiki. Zvakanyanya kutungamira kwekutungamira kurera zvichave zvishoma (kana zviripo) zvakanaka kudzoka. Yakanyanya kunangidzirwa kutungamira kuriritira uchishandisa epamberi dhata segmentation uye yakakosha, inoenderana zvemukati ichagadzira zvine chinangwa zviitiko zvako zvinotungamira uye pakupedzisira kukubatsira iwe kurova izvo zvibodzwa (s) zvekushambadzira otomatiki awakatsanangura pakutanga.
Kugovanisa Yako Yekutengesa Inotungamira
ne Net-Mhedzisiro Kushambadzira Kushanda, isu tinozvirumbidza nekuve neakanakisa epamberi dhatisheni uye kutungamira ekurera maturusi mubhizinesi. Kuendesa mameseji akanangwa zvakanyanya nezvakakodzera zvemukati ndiyo nhanho nyowani yemakampeni ese ekutengesa uye isu takaita kuti zvive nyore kune vashambadzi kuti vaite neNet-Mhedzisiro. Yedu segmentation mashandiro ndiyo musimboti weNet-Mhedzisiro uye inobatsira kutungamira ako ekutungamira ekurera zvirongwa pakati pezvimwe zvakakosha zvekushambadzira otomatiki mashandiro sekutungamira zvibodzwa, pakarepo ziviso, kuzivisa uye nezvimwe.
Iwe unogona kugadzira yakadzika zvikamu zvemitemo kuti utange chero mushandirapamwe wekurera uye bazi rega rega mumushandirapamwe rinofambiswa neiyo imwechete simba segmentation injini, ichibvumidza mazana ezvikamu zvakasanganiswa kune zvine hungwaru uye nyore kufambisa zvinotungamira kuburikidza nedzidzo nekutenga maitiro.
Tags: kuderera kwekutengesa kwakarasikakuderera kwekushambadzira kumusorokudzikira kutengesa kutendererashandisa kushambadzira otomatikiwedzera marikutungamirira kutarisiratungamira kuriritira zanomarketing automationkushambadzira otomatiki chidimbukushambadzira otomatiki zanoanokwanisa anotungamiramikana yekutengesakutengesa kwekutengesa
Michael ndiye Director weKushambadzira we Net-Mhedzisiro. Michael inyanzvi, ine hunyanzvi uye ine hunyanzvi hweKushambadzira Technologist uyo anowana budiriro nekucherechedza mapatani, kugadzira mhinduro dzekugadzira uye kushandisa tekinoroji yepamusoro-soro kuita kuvaka chiziviso cherudzi mukutsigira kushambadzira nekutengesa zvinangwa.
Chii chinonzi Google Analytics Cohort Kuongorora? Yako Yakadzama Nongedzo
Ida iyo iwe yaunotaura kuyerera kuyerera muchinyorwa chako Michael! Izvi zvinhu zvinogona kuomarara uye ndakazviona zvakakosha. Kunyanya kana iwe uri kushandisa chishandiso senge Hubspot uko pasina chinomiririra fanera rauri kuvaka.
Sep 29, 2015 na12: 13 PM
"Izvo zvakadzama zvaunogona kuteedzera zvinotungamira uye nekugadzira makwikwi ekurera ekukurudzira ayo anopindura zvakateerana kuhuwandu hwevanhu + zviitwa, ndipo paunobudirira zvikuru nekushambadzira michina." Ida izvi uye hauna kukwanisa kubvuma zvimwe.
Anoda kuziva Mike kuti anzwe marondedzero aunoita uye kushandisa "Kutungamira Chiitiko" uye "Chiitiko Chekuita" kukudziridza zvakanyanya zvakagadziriswa ekurudzira?
Ndira 21, 2018 na11: 34 PM
Chinyorwa chikuru Michael! Kugadzira yakanaka yekushambadzira otomatiki zano iri chokwadi hwaro hwebudiriro mumakore anotevera
Jun 20, 2021 pa6: 04AM
Ichi chinyorwa chakashama ziso pakushambadzira otomatiki zano kuendesa.